बिमस्टेक पछिको काठमाडौँ « प्रशासन
बिमस्टेक पछिको काठमाडौँ
हरेक दिन बिहान भिमसेनगोलाबाट सुरु हुन्थ्यो मेरो विद्यालयको यात्रा । करिब दुई महिना देखि फोहोरले असिन पसिन भइरहेका राजधानीवासीसँगै यसको प्रत्यक्ष कष्ट भोग्नेमा म पनि एक थिएँ ।
हरेक दिन घाँटीमा झुण्डीएको टाईले नाक छोपेर विद्यालय हाँकिनु बाध्यता नै भइसकेको थियो । फोहोरसँग सरोकार समूह नुवाकोटको डम्पिङ साइटमा पहिरो गएर समस्या आई परेको भनेर पन्छिन खोज्थे भने सरकार उनीहरूकै कुरामा हो मा हो मिलाउँथे । समस्याको समाधान तर्फ कसैको ध्यान जान सकेको थिएन ।
विद्यालय जाने आउने क्रम जारी नै छ । केही दिन अघिको कुरा हो, राजधानीको शीर्ष स्थानहरूमा एकाएक परिवर्तन आउन थाले । हाम्रो बस गुड्ने रुट एकाएक दुलही जस्तै सजिन थाले । ओहो कस्तो रमाइलो, कति राम्रो भन्ने जिज्ञासा मनमा उतार्दै मैले मम्मीसँग यसबारे जिज्ञासा राखेँ ।
मम्मीले थाहा पाई नपाई छोटो र सटिक जवाफ दिनुभयो । भन्नुभयो –अहिले यहाँ विमस्टेक पर्व चलिरहेको छ । त्यसैले यस्तो देखिएको हो । गत भाद्र १४ र १५ मा सुरु भएको विमस्टेकले राजधानीका बाहिरी सहरलाई दुलही बनाएको थियो ।
जुन कुरा हामीलाई सामाजिक शिक्षा पढाउने र इन्चार्ज समेत रहनु भएका माधव पुरी सरले पनि जानकारी दिनुभएको थियो । तर पनि मेरो मन त्यसै बस्न सकेन । हरेक दिन विद्यालयबाट आवात आवतजावत गर्दा देखिने सहर अब आउने दिन अर्थात् सम्मेलन पछि पनि यथावत् रहन्छ भन्नेमा सङ्कोच थियो । सधैँ यस्तै झिलिमिली सहर देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा थियो । त्यो सम्भव थियो ।
च्यापिएर बसेका फोहरमैला कतिखेर बाहिर आउन पाउँला भनेर ढुकेर बसेका थिए । यत्रतत्र छरिएर रहने बानी परेका फोहोर मैला यत्तिकै राजधानी छोड्ने वाला छैनन् । फेरी अर्को कुरा मनमा खेल्यो, विमस्टेक पछि थुप्रिने फोहोरले के गर्ने होला ? यसको सही विसर्जन भएन भने फोहोरको कोलाहलले फेरी हामीले सास्ती भोग्नु पर्नेछ नै !
यता विभिन्न कराहरु मनमा खेलिरहेका थिए तैपनि भाद्र १३ गते सम्म विद्यालयको यात्रा जारी थियो । जति हे¥यो त्यति राम्रो बन्दै थियो राजधानी । यो क्षणिक हो भन्ने मनमा थियो । भाद्र १४ र १५ गते सुरु भएको सम्मेलनले विद्यालय जानबाट वञ्चित गरायो नै । विद्यालय खुले पछि पनि पहिला जस्तै झिलिमिली सहर भइदिए हुन्थ्यो भनेर मैले मनमनै सोच्नु बाहेक केही थिएन ।
स्मार्टसिटीको जय होस !
कक्षा ७ (एफ)
Tags : बिमस्टेक श्रेया नेपाल